Maraoka sy ny fahafahan’ny bolongana · Global Voices teny Malagasy
Maraoka sy ny fahafahan’ny bolongana
Voadika ny 09 Janoary 2008 9:42 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Português, Español, বাংলা, English
Tsara laza ho iray amin’ny firenena maro silamo manerantany ho manam-pahalalahana indrindra i Maraoka. Mifanakaiky ny fitovian-jon’ny vehivavy amin’ny lehilahy, manam-pahalalahana kokoa ny fampahalalam-baovao , vitsy ny vohikala voarara, ary ankehitriny, dia afaka manoratra izay tsy azon’ny fampahalalam-baovao soratana ny Mpanabolongana, araka an’i Agence France-Presse (AFP) aza moa dia ny tontolom-bolongana maraokana no “ manam-pahalalaham-pitenenana indrindra manerana an’i Afrika avaratra silamo mpitana ny nentin-drazana.”
The View From Fez no voalohany nametraka rohy tamin’ny lahatsoratra, ary navoitrany fa:
The View From Fez no iray amin’ny bolongana vitsy nahomby miteny anglisy ary manam-pamaky manodidina ny arivo isan’andro.
Navoakany moa ny vokatry ny fanomezandoka ny bolongana maraokana hanaporofoany izany ka nifidianana ny The View From Fez ho laharana faharoa amin’ny bolongana Maraokana.
Kelvy K. (It Belongs to Man to Err), mpanabolongana Karana mipetraka any Kuwait, indray nanoratra tamin’ity lahatsoratra ity:
Hatramin’ny nahazoanay Karana ny fahafahana tadiavinay, dia tsy ho azonay an-tsaina izany fanakanana ny fahalalahan’ny bolongana sy ny fampahalalam-baovao izany. Dia heverinay ho mahatsikaiky izany hoe maro ny mpanabolongana migadra noho ny famoaha-keviny sahala amin’izao. Ohatra ny amin’ilay mpanabolongana Saodiana nigadra noho ny lahatsoratra navoakany, misy tahaka izany koa any Afrika, Tonizia, Bahrain, Kuwait, Ezipta, Alzeria sns..
The Morocco Report koa nanamarika ny lahatsoratra, nilaza hoe:
Amin’ny mahampamaham-bolongana ahy nandritra ny roa taona farany teo dia ekeko ny voalohazan’ny lahatsoratra fa tena malalaka tokoa ny Mpamaham-bolongana Maraokana amin’izay lahatsoratra tiany hosoratana, ary mivandravandra io fahalalahana io ao amin’ny maroc-blogs.com.
Tsy adino ny milaza miarahaba ny bolongamaraokana! Halalaka amin’ny famokarana lahatsoratra mahaliana, manaitra ary hevitra mihantsy mandrakariva anie ianareo hanehoanareo ny hevitrareo.
Milaza ny fisian’ny Mpanabolongana Maraokana malaza dia i Larbi sy i Mehdi7 ihany koa ny lahatsoratra.
Eo indrindra isika, manan-kambara amintsika momba ny nahatafiditra azy amin’ny tontolom-bolongana i Everything Morocco :
Ato an-trano aho izao no manabolongana, amin’ny solosaina findehandeha afaka iseraserana amin’ny DSL, anivon’ny tanàna mbola miaina tanteraka amin’ny fanao tamin’ny andro fahagola. Eto am-pitendrena aho no mahita ny vehivavy mitondra ny mofo hampidirina anaty lafaorom-pokonolona sy ny ampondra mizotra anaty lalana tery mitondra ny entana sy ny mpizahatany toy ny mampideradera ny asa-tanana fahatsiarovana novidiana teny an-tsena. Ny Loviaben’ny zanabolana moa mameno ny tafontrano hanasan’ny vehivavy sy hanahazany lamba hatrany ary ikarakarany amin’ny tanana ny sakay sy sakaimalao. Dia tahaka ny mahita akoho na olona mpandala nentindrazana na ondry na saka na vorondolo izany ianao eto.Mandroso haingana tsy nisy tahaka izany hatramin’izay ny fotoana sy ny haitao, saingy amin’ny fiainana andavanandro ankapobeny dia nyomaly tsy miova ihany. Singanina manokana amin’izany toe-javatra izany ny ao Fez.
Nefa na dia misy fandrosoana tahakaizany aza ao maraoka, na amin’ny haitao izany na amin’ny fahafahana, dia mbola lavitra ny lalana hodiaviny. Ny mpanabolongana MoTIC (fr) ary dia mandrohy ireo tsy rariny sy ny sivana (mbola misy) ao Maraoka. Sami ben Gharbia ao amin’ny Global Voices Advocacy ihany koa efa namosabosaka ny adi-hevitra mikasika ny sivana ao Maraoka.
1 herinandro izayFitantanam-pitondrana
21 Avrily 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Maraoka: Resabe tamin'ny karaman'ny mpanazatra vaovaon'ny ekipam-pirenena baolina kitra (2010)